Banyere Anyị - Keyu Zhanye Equipment & Technology Co., Ltd.
Anyị na-enyere ndị ụwa na-eto eto ebe 1995
Call Support Ekwentị: 0531-88825528
email Nkwado Email: alcohol@keyualcohol.com
email Nkwado Email: ethanol@keyualcohol.com
email Nkwado Email: sale@keyualcohol.com
Mmanya Production na Non-nri & na-abụghị saccharification technology
Complete osisi nke zuru ethanol
Complete osisi nke mmanya mmepụta
Complete osisi nke DDGS
Complete osisi nke mmiri mmiri CO2
Complete osisi nke starch sugar mmepụta
Complete osisi nke n'efu mmiri mkpofu
Gburugburu okpomọkụ Exchanger
Tubal okpomọkụ Exchanger
Regulations na ụkpụrụ
Jinan Keyu Zhanye Equipment & Technology Co., Ltd bụ a elu & ọhụrụ technology enterprise. Ọ na-tọrọ ntọala site na ndị professors, advisors, ndị ọkachamara nke Shandong Light Industry University & Shandong gbaa ụka Design Institute na a otu nke agadi injinia. Ha na-nwetara na ubi nke na-aba n'anya na CO2. The ogbako enyene 50,000 M2. The ụlọ ọrụ na-emi odude ke mma iyi obodo Jinan, nke bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba na omenala n'etiti Shandong n'ógbè.
Ebe ọ bụ na 1995, Keyu Company ka na-eme imewe, ewu na nyere oru ọrụ maka ọtụtụ distilleries, ethanol manufactories na chemical ụlọ mmepụta ihe na na China.
Keyu ụlọ ọrụ malitere imewe, ngwá rụpụta na oru ọrụ maka a 100,000T / Y ezi àgwà oriri mmanya oru ngo, 15,000T / Y acetic acid oru ngo, 10,000T / Y CO2 oru ngo na mmanya n'efu na mmiri ọgwụ oru ngo na Pakistan. Anyị ihe ịga nke ọma dechara 60,000 T / Y mmanụ ụgbọala ethanol oru ngo na 30,000 T / Y protein oriri (DDG) oru ngo na Russia. Anyị na-chepụta ma rụọ ndị ọkasị mma mmanya na yiri oru ngo nke American ahịa. The magburu onwe ya mma na ọrụ na-ukwuu jara mma site ndị mba ọzọ na ahịa.
Keyu Company mgbe niile dabeere na "na-eje ozi na ndị ahịa ji obi" ịrụ ndị na-esonụ oru ma na anụ ụlọ na esenidụt.
A. ibido n'ozuzu imewe, ewu ma ọ bụ oru nchèghari ọrụ 3,000-500,000T / Y ezi-na-quality alcohols (GB10343-2008).
B. ibido ọrụ owuwu nke 1,500-300,000T / Y zuru ethanol (molekụla myọ bed usoro).
C. Design na-enye ngwá maka napụtara & amị ezi-edu nri ọkwa CO2 maka distilleries / ethanol osisi. Standard nke GB10621-2006 e ruru.
D. Tụkwasịnụ zuru technology (elu uzu na ụwa) na-ewu ụlọ ọrụ na-emepụta granuleprotein oriri (DDGS) maka distilleries / ethanol osisi na-eji ọka na wheat dị ka ihe onwunwe.
E. Nye "efu vinasse ịrụzu" Usoro, nke bụ onye dị elu technology na China.
F. Nye technology na ngwá distilleries / ethanol osisi na-emeso vinasses mmiri mmiri juputara, nwee drained wastewater izute "Integrated Wastewater Ihapu Standard" (GB18918-2002).
G. Design na rụpụta ngwá maka mmiri ịzọpụta ngo, ma na ibelata mmiri oriri na 20m3 maka amị otu ton mmanya.
H. Nlụpụta pụrụ iche ngwá n'ihi na ìhè ụlọ ọrụ na chemical ụlọ ọrụ
Anyị ụlọ ọrụ ọ bụghị nanị na-enye elu-nkà na ụzụ ọhụrụ na elu àgwà akụrụngwa ma-enye ndị magburu onwe mgbe-sales ọrụ. Nka na ụzụ ọzụzụ na dum na-ndụ oru ọrụ ga-nyere mgbe emecha ngo dị ka mma.
Anyị ozi bụ ewu ahịa afọ ojuju na anyị top-ogo technology, top-ogo ngwá, top-ogo n'aka eguzo na-top-ogo ọrụ.
Jinan Keyu Zhanye Equipment & Technology Co., Ltd bụ a elu & ọhụrụ technology enterprise.It na-tọrọ ntọala site na ndị professors, advisors, ndị ọkachamara nke Shandong Light Industry University & Shandong gbaa ụka Design Institute na a otu nke agadi injinia.